Sei kudzidza muUkraine?
Unoziva, ose nyika uniqiue. nyika yose achawana mazita kwezvikonzero, nei sarudza izvozvo. Hezvinoi mazita zvikonzero muUkraine. Unoziva kuti nei kudzidza muUkraine zvino.
Ukrainian mumayunivhesiti ane chaizvoizvo yepamusoro dzidzo. A yakawanda unviersities ane makosi Chirungu kana mukugadzirira fakaroti kuti kudzidza mutauro wokuRussia kana Ukrainian mitauro.
Munyika yose Vanoonekwa Courses (Europe, UK, USA, Asia, Africa, WHO, UNESCO, European SANGANO RINOONA, etc.)
Ukrainian mumayunivhesiti ane ichi zvose anoziva. dhipuroma rako richava zvakaisvonaka kwose kwose munyika.
Medical dhigirii kuzivikanwa WHO, UNESCO, dumbu (UK), USMLE (USA), yose EU uye Various International Masangano
Medical kosi ndiyo yakakurumbira Ukraing pakati vadzidzi vokune dzimwe nyika. Unogona easly kudzidza MBBS muUkraine, nekuti zvichava kuonekwa kwose kwose World.
Izvi Mashoko ndiwo scarry nokuda guru nhamba yevadzidzi dzakawanda. Ivo zvinoreva zvimwe mari uye zvakaoma rubvumo. Asi zviri nyore muUkraine. Haufaniri kuita chero ichi bvunzo.
NO pasuo bvunzo, CHETE chitupa yokusekondari nokuda Bachelor kuti Zvirongwa
Ruzha rwakaita muswe, asi ichokwadi. Chaizvoizvo nyore rubvumo.
Muripo muripo unobhadharwa pamusoro Patakasvika
A yakawanda vadzidzi havadi kubhadhara pamberi kusvika. Pano zvaungaita ichi. chokwadi, unofanira kubhadhara kukokwa tsamba uye mabasa ose sangano kana waishandisa, asi zvakadaro, zvinenge mari zvose zvauchasangana kubhadhara chete pashure asvika kuUkraine. mari yenyu makarwe.
Cost inoshanda (yakachipa European dzidzo)
Achitarisa European dzidzo pamwe rakadzika muripo mari yechikoro? Hezvinoi. Ukraine ane chaizvoizvo kokupata dzidzo
Ukraine rakamiswa pakati uye kumabvazuva Europe. Ndiro huru pane nyika muEurope. Heino chaizvoizvo European standarts yeupenyu yakaderera mitengo.
Nani Job Inofadza
Ukraine ndiyo nzvimbo yakanaka nebasa kutanga
Mwero Climate gore rose
Kanganwa pamusoro zvinoshamisa inopisa kana hwose kutonhora. All mwaka yegore chakanaka muUkraine
Vapfume Nebasa nokuda Visiting Vanapurofesa kubva USA, KANADHA, UK, nezvimwewo.
A guru nhamba mumayunivhesiti ane nokufambidzana pamwe USA, Canada uye unviersities European. Zviri mukana wako kusangana proffessors pose yakakurumbira kuUkraine pamwe rakadzika muripo muripo.
Mikana Permanent Residence & Settlement muEurope pashure pokupedza chirongwa yokudzidza
Ichokwadi. Iva mudzidzi akanaka uye uchafarirwa. kugona kuwana kugara European nyika.
100% Visa ugova vakakodzera musarudzo
One zvakawanda ndinoiitawo – imi 100% vhiza kana kudzidza muna wokuUkraine yunivhesiti.
Pashure zvose isu vanongoda kutaura, kuti Ukraine zvechokwadi nyika zvinoshamisa pamwe kuwanda nzvi vadzidzi dzakawanda. Dzidza muUkraine iwe uchawira murudo naro. Shanyira Ukraine uye uchafarirwa. hamutsvaki mubvunzo “Sei kudzidza muUkraine?”
UPD: kubva 2016 rubvumo kwacho wokuUkraine mumayunivhesiti nokuti vadzidzi vatorwa aviable Via Ukrainian Munopinda Center.
Zvinogona kubatsira kwauri
rubvumo muitiro & zvinodiwa muUkraine